Brag Archives — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
-qhayisa -qhayisa -qhayisa -qhayisa -qhayisa -qhayisa -qhayisa -qhayisa -qhayisa -qhayisa -qhayisa -qhayisa -qhayisa -qhayisa
Yakhiwe ndinokuqhayisa Pt. 2
Air iYordan kukho umfanekiso. Andizange bezinxibile ekhula nangona kakhulu, kuba abazali bam wala ukuba uthenge kum aphakame izihlangu eninzi. Andizange ndiyayithanda, kodwa ndandisazi andizange ndizakufumana izandla zam phezu iperi. Ngoko kwanyanzeleka ukuba ukumelana - ngokuthi ngathi abazange ayisekho. Kuye isibini elide iminyaka ezama ngokwam baqiniseke ukuba Reebok umnqamlezo uqeqesho ezinamagama. Kodwa ndathi abadala, Ndaqonda iYordan kwakunzima ngoyaba. Bonke abahlobo bam baba isibini okanye emibini, yaye omnye wabahlobo bam ithe phithi ziphum nabo.
Xa kwafika uhlobo olutsha ngaphandle, wayengathandi nje ukudlula ilokhari Foot basekuhlaleni xa wayekade ixesha; Wakha ubomi bakhe ngeenxa ukufumana ukuba isibini entsha. Wayeqiniseka wayesazi yonke imihla ukukhululwa Jordan, wayeza ukuthenga izihlangu efanayo imibala eyahlukileyo, yaye badla ngokuchitha kusasa ngoMgqibelo alinda phambi evenkile lwesihlangu. Lalibhabha engqondweni yam. Ngoko ekugqibeleni kwafuneka ndizibuze, “Yintoni eyodwa gqitha ezi zihlangu?! Ngokucacileyo ndiza into ekuphosayo kusini na.”
phithi Umhlobo wam kunye iYordan wenza ingxelo. Nokuba yinyaniso na okanye hayi, he was saying loud and…
Yakhiwe ndinokuqhayisa Pt. 1
Akukho mntu uthanda iidropha igama. Uyazi ukuba ngubani endinco- malunga. Abo abantu abafuna ukwazi ukuba bazi abantu ukuba uyafuna ukwazi. Xa ndicinga "namedropper,"Kukho enye mfo ukuba afike kwaoko engqondweni. Ndiye ndadibana kuphela ukuzalisa amaxesha, kodwa ngalo lonke ixesha sibe sathetha, isiqingatha incoko yethu enyuselwa kunye amathontsi negama ubuvuvu.
Uyazi inani kakuhle abantu "ixesha enkulu", kwaye ugqibe ukukwazi ngqiqweni ukuba ndizimele abo amagama kuyo nayiphi na incoko. Nantsi umzekelo. ndithi, "Umntu Hey, Ngubani ixesha?"Impendulo yakhe: "Owu, nto malunga emini. Kundikhumbuza xesha Ndidlale afake elakhe kunye Michael Jackson emini enkulu eParis. "ILizwi?
Nyaniseka, loo nto nje igama iidropha ukuba irk nathi nangona. Yinto abantu siqhayisa ngokubanzi. Sidiniwe amadoda ukuva ikhule siqhayisa iintsuku football zezikolo eziphakamileyo zazo (lixesha lokuqhubeka, mhlekazi). Thina masingethi abahlobo bethu Sinelungelo elikhethekileyo lokuba bafumane indlela ethile GamaLamLomsebenzisi yonke indawo zaphesheya atyelela. Kwaye awunalo umonde kakhulu kubantu iinkcukacha kuthi yonke into eninzi zithenga (ngaphandle kokuba sele Rappers, kanjalo). Whether it’s covertly bragging about who you…